ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ရ.တ.က.သ) က ထုတ်ဝေတဲ့ #ခွပ်ဒေါင်းတွန်သံ စာစဉ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၂) ထွက်ပြီ။
Public Voice TelevisionPVTV MyanmarSpringRevolutionခွပ်ဒေါင်းတွန်သံခွပ်ဒေါင်းတွန်သံ_မိုးသို့ညံစေရမည်အရေးတော်ပုံ_အောင်ရမည်
2021-10-18 at 9:49 AM
လူတွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိသွားတယ် …..
(ဘဝတူ non cdm တွေရာထူးတက်သွားကြတယ်
ဘာတတ်နိုင်သေးဆိုတဲ့အကြည်တချက် ခံစားလိုက်ရပေ့မဲ့ –
မိမိတို့ရဲ့အဓိကခံယူချက်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်နှင့်လူထု အကျိုးအတွက်ကိုယ်ကျိုးမဖက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့
” အမျိုးသားရေး ”
တစ်ချို့က CDM မို့
တစ်ချို့က ရာထူးမရှိတော့ စောက်ဂရု မစိုက်ကြတော့ဘူး ကျေးဇူးတရားဆိုတာတွေ မေ့ကုန်ကြတယ် …..
တစ်ချို့က ရာထူးမရှိ အလုပ်မရှိတော့ မွဲနေကြပြီထင်ပြီး အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကုန်ကြတယ်….
တစ်ချို့က ကိုယ်တွေက အဆင်မပြေတော့
တစ်ချို့က ကိုယ့်ကိုမြင်ရင် မှတ်ပြီလား
နည်းတောင်နည်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ လှောင်ကြည့်ကြည့်တယ် ….
အဆင်မပြေဘူး ဆိုပြီးအားမနာ ပါးမနာငြင်းကြတယ်…….
သူတို့တွေကို ကျွန်တော်/မတို့ အပြစ်မတင်ပါဘူး
စိတ်ဓါတ်တွေကို ခွဲခြားခွင့်ရသွားတာကို အကြိမ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်ရင်း…….
2021-10-18 at 10:11 AM
2021-10-18 at 5:42 PM
Radio NUG – Oct 18th, 2021 Morning